Kulan u furmay Madaxweyne Farmaajo & Wakiilada Beesha Caalamka - Awdinle Online
Kulan u furmay Madaxweyne Farmaajo & Wakiilada Beesha Caalamka
Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa waxaa kulan uu uga furmay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Wakiilada Beesha caalamka, kaas oo looga hadlayo arrimo dhowr ah.
Kulanka ayaa labada dhinac waxaa ay uga hadlayaan qabashada shir ay yeelanayaan Madaxda dowladda & dowlad goboleedyada, xilliga uu qabsoomayo iyo halka lagu qabanaayo iyo sidoo kale sidii xal looga gaari lahaa muranka hareeyay doorashooyinka dalka oo aan weli wax heshiis ah laga gaarin.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in safarka Mareykanka ee Soomaliya Amb, Donald Yamamota uusan qeyb ka heyn kulanka sababo la xiriira in Diblomaasiyiinta Mareykanka aan loo ogoleen inay ka baxaan xeyndaabka garoonka Muqdisho
Xubanaha Beesha Caalamka ayaa waxaa ay Madaxda dowladda & dowlad Goboleedyada ku cadaadinayaan in heshiis ay ka gaaraan arrimaha doorashooyinka maadaama uu geb0gabo yahay mudada xilheynta Madaxda Dowladda Soomaliya.
Xubno uu horkacayo Wakiilka Qaramada Midoobay ee Arrimaha Soomaaliya Amb, Jemis Swan ayaa waxaa ay kulamo kala duwan la qaateen Madaxda dowlad Goboleedyada, si ay ugu cadaadiyaan in heshiis laga gaarao arrimaha doorashooyinka.
Kulanka Maanta ee Madaxweyne Farmaajo & Xubnaha Beesha Caalamka ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli uu baaqday kulan ay dhawaan ku baqeen in la isugu yimaado Madaxda dowladda & Dowlad Goboleedyada.
Previous articleSafiirka Mareykanka oo hal arrin uga baaqday kulanka Farmaajo & Beesha Caalamka
Next articleKenya iyo UK oo u heshiiyay Al-Shabaab